संक्रमितको तथ्यांक अनुमानमा आधारित- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
संक्रमितको तथ्यांक अनुमानमा आधारित
एकीकृत जानकारी दिने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन
विराटनगर — नागरिकमा कोभिड–१९ को असरसम्बन्धी दैनिक तथ्यांक अनुमानमा आधारित भएको देखिएको छ । प्रदेश १ का ९ भन्दा बढी प्रयोगशालाबाट जारी हुने पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट र सरकारी निकायले गर्ने एन्टिजेन परीक्षणमा देखिने संक्रमितको मात्र तथ्यांक सार्वजनिक गरिन्छ ।
यही तथ्यांकका आधारमा दैनिक देखिने कुल संक्रमितमध्ये अस्पतालमा भर्ना भएकालाई घटाएर होम आइसोलेसनमा रहेकाको तथ्यांक निकालिन्छ । सहजै उपलब्ध आरडीटी र एन्टिजेन किट्सबाट घरमै परीक्षण गर्नेको संख्या अहिले निकै बढे पनि यसको तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग छैन । कोरोना कहरको तेस्रो चरणमा आइपुग्दासम्म स्थानीयस्तरमा यस सम्बन्धमा एकीकृत जानकारी दिने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले सरकारीस्तरबाट उपलब्ध दैनिक संक्रमितको संख्यामा अस्पतालमा भर्ना भएकालाई घटाएर होम आइसोलेसनमा रहेका निकाल्ने गरिएको बताए ।
‘होम आइसोलेसनमा रहेकामध्ये कति निको भए भन्ने आधिकारिक जानकारी हुँदैन, साता/ दस दिन पछि यति निको भएका होलान् भन्ने अनुमान गरेर तथ्यांक निकालिन्छ,’ उनले भने, ‘ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित साताभित्र निको हुने वा काममा फर्कन सक्ने भनिएकाले संक्रमुक्तको संख्या धेरै ठूलो हुन सक्छ ।’
निर्देशक बस्नेतका अनुसार व्यक्तिगत परीक्षणमा संक्रमण देखिए पछि चिकित्सकको परामर्शमा औषधि सेवन गर्दै घरमै आराम गर्नेको संख्या ठूलो हुन सक्छ । होम आइसोलेसनमा बस्नेको यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग नभएको उनले बताए । भेरिएन्ट नयाँ भए पनि तथ्यांक अपडेट गर्ने प्रणाली परम्परागत नै भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.सुरेश मेहताले बताए । उनको अनुसार चौध दिनपछि अन्दाजले यति जना संक्रमणमुक्त भएका होलान् भन्दै तथ्यांक निकालिन्छ ।
‘पोजिटिभ रिपोर्ट आएको दिनदेखि गणना गरिने हुनाले संक्रमणमुक्त कम देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पुरानै छ तर कोभिड–१९ को ओमिक्रोन भाइरस संक्रमित ३ दिनदेखि सात दिनमै निको भइरहेका छन् ।’ अबको सातापछि संक्रमणमुक्तको संख्या बढ्कोे देखिने उनले बताए ।
‘अस्पतालमा भन्दा होम आइसोलेसनको संख्या धेरै भएको हुनाले यकिन जानकारीका लागि स्थानीय तहमा वडा स्तरमै संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ,’डा. मेहताले भने, ‘यतातिर कसैको ध्यान गएको देखिन्न ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुसार १ माघदेखि ११ गतेसम्म ९ हजार ८५ संक्रमित भएको देखिन्छ । १ माघमा १ हजार ३ सय ९७ सक्रिय संक्रमित रहेकोमा ११ माघसम्म ६ हजार ८ सय २१ पुगेको छ ।
मन्त्रालयको अनुसार उक्त अवधिमा ५ हजार ४ सय २४ सक्रिय संक्रमित थपिएको देखिन्छ । उक्त अवधिमा केवल १ हजार ९१ जना संक्रमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको अनुसार १ माघमा होम आइसोलेसनमा रहेकाको तथ्यांक १ हजार ३ सय ७५ देखिन्छ भने ११ माघसम्म आइपुग्दा ६ हजार ७ सय ३३ पुगेको छ । उक्त अवधिमा ५ हजार ३ सय ५८ जना होम आइसोलेसनमा थपिएका छन् । निर्देशक बस्नेतको अनुसार अधिकांशमा छिटो निको हुने ट्रेन्डको आधारमा भन्दा होम आइसोलसनमा रहेकामध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् २ हजार बढी निको भइसकेको हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७८ २०:४८
सगरमाथा चढ्दै अश्‍वेत आरोही
स्थानीय नेपाली र शेर्पाहरूसँग सम्बन्धका लागि
काठमाडौँ — सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा ४ हजार मानिसले आरोहण गरिसके । थुप्रै देशका मानिसले सगरमाथामा पाइला टेकेका छन् । तर पहिलो आरोहणको ७ दशकभन्दा लामो अवधिमा जम्मा ८ जना अश्‍वेत नागरिकले सगरमाथा चढेका छन् ।
तिनै ८ जनालाई पछ्याउँदै अहिले सगरमाथा आरोहणका लागि ९ जनाको अश्‍वेत टोली नेपाल आइपुगेको सिएनएनले जनाएको छ । सिएनएनमा प्रकाशित समाचारअनुसार उनीहरूले एक अभियानकै रुमा आरोहणको तयारी गरेका हुन् ।
अश्वेतहरूको यस आरोहण अभियानलाई 'फूल सर्कल' नाम दिइएको छ । 'यो एक आरोहण अभियान हो । यो पहाडहरूमा समय बिताउनका लागि बनेको समूह हो । तर यो समूह विश्वव्यापी समुदाय निर्माणका लागि पनि हो । र यो कालाहरूको समुदायबारे बनेको भाष्य परिवर्तनका लागि पनि हो । विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा र बाहिर हामी अन्तरक्रिया गर्छौं भन्नेबारे पनि यो अभियान बनेको हो,' फूल सर्कलका एक सदस्य रोजमेरी सालले भनिन् ।
साल यसअघि अलास्कास्थित डेनाली र माउन्ट किलिमन्जरो आरोहण गर्ने अश्वेत समूहको एक सदस्य समेत हुन् । तर 'फूल सर्कल'को सदस्यको रुपमा उनी यस अभियानलाई फरक रुपमा अर्थ्याउँछिन् ।
तुलनात्मक रुपमा पर्वतारोही समुदाय सानै छ । उक्त समूहसँग जोडिएको सगरमाथा संसारका सबैले चिन्नसक्ने एक नाम हो । फूल सर्कलकै अर्की सदस्य अब्बी डायोन सगरमाथाले सबैलाई आकर्षित गरेको ठान्छिन् । अमेरिकाको फ्लोरिडावासी डायोन आफू बसेकै सहरमा आरोहण सम्बन्धी जिम सञ्चालन पनि गर्छिन् । जुन अमेरिकामै दुई अश्वेत महिलाले सञ्चालन गरेका आरोहणसम्बन्धी जिममध्ये उनको एक हो ।
यस समूहले हिमाललाई एक बिम्बको रुपमा पनि अर्थ्याएको छ । फूल सर्कलका सदस्यहरूका अनुसार यस आरोहण अभियानको एक महत्वपूर्ण काम भनेको स्थानीय नेपालीहरू र शेर्पा समुदायहरूप्रति उनीहरूको आरोहणप्रति सम्मान गर्नु हो ।
फूल सर्कलले शेर्पाहरूलाई उनीहरूले नियमित आम्दानी गर्नेभन्दा धेरै रकम दिने बाचा गरेका छन् । जबकि उनीहरू पर्वतारोहणका आधारमै आफ्नो परिवारको खर्च धानिरहेका छन् । उदाहरणका लागि सगरमाथाको पहिलो र सर्वाधिक प्रसिद्ध आरोहणलाई लिने हो भने सर एडमन्ड हिलारीले आफ्नो नाम १९५३ मा पहिलो आरोहीको रुपमा लेखाएका थिए । तर उनका शेर्पा गाइड तथा सहकर्मी तेन्जिङ नोर्गेको नाम दशकौंसम्म रेकर्डमा थपिएन।
यसवाहेक हिलारीभन्दा पनि पहिले थुप्रै शेर्पाहरू शिखरको चुचुरोमा पुगेको बताइन्छ । डायोन भन्छिन्, उनीहरूको आरोहण अभियान फूल सर्कलले सगरमाथा आरोहणलाई 'उपनिवेशबाट हटाउने' (डिकोलोनाइज) लक्ष्य राखेको छ ।
'हाम्रो लक्ष्य भनेको बाहिरका मानिसहरू र यसलाई अपनत्व गर्न नसकेकाहरूसँग गहिरो र सम्मानजनक सम्बन्ध राख्नु हो । यदी तपाइँलाई पनि यो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ भने स्वागत छ,' सालले भनिन् ।
साल आफ्नो बाल्यकालमा खेलकुद र घरबाहिर निस्कनका लागि अवरोध गर्ने पहिलो व्यक्ति नै आफ्नै समुदायका भएको सम्झन्छिन् । उनी भन्छिन्, 'जब म किशोरी थिएँ । मैले रक क्लाइम्बिङ कोर्स जसरी पनि गरेँ । म आफ्नो परिवारका सदस्य, साथीभाइहरूलाई भन्थेँ, तब तुरुन्त भनिन्थ्यो कि, ओहो कालो मानिसहरूले त्यस्तो गर्दैनन् भन्ने जवाफ आउँथ्यो । कालो मानिस हिमाल चढ्दैनन् भनिन्थ्यो ।'
संयोगवश् साल जन्मिएको ठाउँ सियाटलमा त्यस्ता मानिसहरू थिए जसले उनलाई यस्तो रुचीतर्फ आकर्षित गर्थे । डायोनका लागि भने महिलाहरू बाहिर निस्कन पाउने प्रश्न पेचिलो बनेको थियो । उनी सोच्थिन् कि ६००० मिटरभन्दा माथि महिनावारी हुँदा कस्तो होला !
दुवै महिलाहरूका लागि प्रेरणाका व्यक्तिको रुपमा फुल सर्कलका संस्थापक फिल हेन्डरसन हुन् । जसले सगरमाथा आरोहणका लागि तयारी गराएका छन् । क्यालिफोर्नियाका हेन्डरसन आम अश्वेत आरोहीहरूका लागि नै प्रेरणा व्यक्तिको रुपमा चिनिएका अगुवा हुन् ।
किलिमन्जरो आरोहणको अश्वेत समूहको नेतृत्व गरेका उनले नेश्नल आउटडोर लिडरसीप स्कुलमा लामो समय प्रशीक्षकको रुपमा काम गरे । प्रारम्भिक चरणमा अरु धेरै अश्वेत युवाहरू जस्तै हेन्डरसन पनि खेलकुदमा सक्रिय थिए । फुटबलमा उत्कृष्ट खेलाडीको पहिचान बनाए पनि घुँडामा चोट लागेपछि भने 'आउटडोर स्पोर्ट्स'मा उनी आकर्षित भए ।
सन् २००० मा हेन्डरसनले अश्वेत आरोही समूहको नेतृत्व गरेर माउन्ट केन्यासमेत आरोहण गरेका छन् । उनी साहसी मात्रै नभएर आम अश्वेत युवाहरूमाझ आउटडोर स्पोर्ट्सका विज्ञको रुपमा परिचित छन् । 'पर्वतारोहण, आरोहण र समग्र आउटडोर इन्डस्ट्रीमा काला जातिको प्रतिनिधित्व भएको छ। तर हाम्रा कथाहरू सुनाइँदैन,' हेन्डरसनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा लेखेका छन् ।
अहिले सगरमाथा आरोहण टोलीमध्ये यसअघि सगरमाथा आरोहणको अनुभव भएका हेन्डरसन मात्रै एक्लो सदस्यसमेत हुन् । जसले २०१२ मा नै सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । र त्यसबेलाको अमेरिकी आरोही टोलीमा उनी एक्लो अश्वेत आरोही थिए ।
सिएनएनका अनुसार हेन्डरसनसहितको ९ सदस्यीय टोली आरोहणका लागि २०२२ को जनवरीमा नेपाल आइसकेको छ । यदी यो टोलीका सबै सदस्यले सर्वोच्च शिखर आरोहण सम्पन्न गरेमा अश्वेत आरोहीको संख्या दोब्बर हुनेछ । फुल सर्कललाई नर्थ फेस, समीट कफी, स्मार्टउल र माउन्टेन सेफ्टी रिसर्चसहितका अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट प्रायोजकहरूले साथ दिएको बताइएको छ ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७८ २०:४५